Diwaangalintii Cod-bixiyaasha Oo Maanta Deegaanka Iyo Guud Ahaan Dalkaba Si Toos ah Uga Bilaabatay. - Cakaara News
Diwaangalintii Cod-bixiyaasha Oo Maanta Deegaanka Iyo Guud Ahaan Dalkaba Si Toos ah Uga Bilaabatay.
Jigjiga(CN) Jimce.Jan.09.2015, Sida aad wararkayagii hore kala socoteen CakaaraNews waxaa arbacadi lasoo dhaafay laga furay deegaanada iyo dalkaba inkabadan 45 kun oo xarumaha doorashooyinka sanadkan 2007-da ah. Xarumahaas ayaa loogu talagay dhamaanba adeegyada kala duwan ee habsami u socodka iyo adeegyada doorasho ee ay u baahanyihiin muwaadiniinta codka bixinaysa.
Hadaba waxaa maanta si toos ah u bilaabay shaqooyinkii diwaan galinta cod-bixiyaasha xarumihii doorashooyinka oo diwaangalinayay cod-bixiyaasha islamarkaana muwaadinkasta oo leh sharciga cod-bixin siinayay kaarka cod-bixinta doorashadan 5aad ee kusoo fool-leh deegaanada iyo dalka.
Waxaa maanta guud ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya kabilaabatay diwaangalinta iyo bixinta kaarasha lasiinayo muwaadiniinta sida sharciga ah uleh in ay codkooda ku doortaan cida ay taageerada iyo kalsoonidaba ku qabaan ee tu tartamaysa doorashada.
Iyadoo ay guud ahaanba dalka ay maanta kawada bilaabatay ayaa waxaa deegaanka Soomaalida Itoobiya saaka si toos ah shaqooyinkaasi uga bilaabatay in kabadan 3178 xarumood oo ay shacabku iskadiwaan galinayeen islamarkaana kaqaadanayeen kaarka ay codka kulabixi donaan.
Waxaa magaalada Jigjiga iyo qaybaha kale ee deegaanka si habsami leh ay maanta uga socotay diwaan galinta iyo bixinta kaarasha oo ay muwaadiniinta sharciga doorashada lahi uga qaybqaateen iyagoo qaadanayay kaarka cod-bixinta.
Habsami u socodka iyo diyaar garowga doorashadan ayaa kaduwan kuwii hore iyadoo ay boardhiga doorashooyinku haqab tireen dhamaan adeegyadii looga baahnaa xarumaha doorashooyinka ee haatan bilaabay hawlahoodii shaqo. Diwaan galinta iyo qaadashada kaarasha cod-bixinta ayaa gabi ahaan dalka kasocod doonta laga bilaabo maanta ilaa iyo 20-ka bishan January ee sanadkan.
XDSHSI iyo shacabka deegaanka ayaa dadaal iyo kago'naashaba kaleh sidii ay doorashadani u noqon lahayd mid nabadgalyo iyo cadaaladba ku dhamaata.